Diidid qaansheegad qalad ah | Hallå konsument – Konsumentverket
Start/otherlanguages/other-languages/Other languages/so/somaliska/Soomaali/so/articles/diidid-qaansheegad-qalad-ah/Diidid qaansheegad qalad ah
Diidid qaansheegad qalad ah
Bestrida felaktig faktura - Somaliska
Hadii aad heshid qaansheegad qalad ah waa diidi kartaa iyada, waxaa loola jeedaa in aad ka dhiidhin karto iyada. Markasta waxaad ka bilaabaysaa in aad la xiriirto shirkadi si aad ugu sheegto waxa qaladka kula ah.
Shirkada kula xiriir qoraal
Ka bilaaw in aad la xiriirto shirkada si aad ugu sheegto waxa qaldamay. Kula xiriir markastaba qoraal, tusaale ahaan email ahaan. Marmar wuxuu ahaan karaa qaladku in uu yahay mid gaf ah oo si fudud lagu xalin karo marki shirkada loo sheego qaladka.
Hadii ay shirkado aqbali wayso in ay saxdo wixi kula qaldanaa waa diidi kartaa qaansheegadkaas ama qaybta qaladka ka ah qaansheegadka.
Sidaan ayaad u diidi karaa
In aad diido qaansheegasho waxa loola jeeda in aad ogaysiiso shirkada in aad diidantahay qaansheegadka, sidaa darteedna aadan bixineynin. Waa muhiim in aad u sheegto sababta ay qaansheegashado qalad kuula tahay tusaale ahaan in lacagta lagaarabo ay san u dhigmin wixi aad ku heshiiseen.
Kantarol qaybta qaansheegadka ugu badan ee qaladka ka ah.
Ka feker kantarolkaaga hadii qaansheegadka dhamaantiis qaldanyahay ama qayb. Mabda,a aasaasiga ah waa in aad bixisaa qeybta saxda ah. Mararka qaar waa in aad la socodsiisaa shirkada in aad tusaale ahaan aad bixineysid lacagta qaansheegadka kala bar. Laakiin in aad diidantahay inta ka harsan lacagta.
Diidimo qoraal ah
Marki aad diideysid qaansheegad waa muhiid in aad qoraal ahaan ula xiriirtaa shirkada si aad u cadayn karto in aad ka dhiidhisay. Waxaa tusaale ahaan u diri kartaa email. Hadii aad direysid warqad waxaa fiican in aad ku dirdo warqadda boostada diiwaangashan si aad u cadeyso in aad diiday qaansheegadka.
Wargalinta shirkada waxaad u baahantahay in aad siiso lambar, lacagta inta ay tahay iyo taariikhta qaansheegadka qaladka kula ah.
Marka aad diido ka dib
Uma baahna shirkadu in ay ka jawaabto ama ay ogolaato diidmada si ay u ansixiyaan. In kastoo ay la noqoto shirkada diidmadaada in ay ayagu ku saxsanyihiin in aad bixiso, iyaga ay jirtaa hadii ay sii wadayaan arinta. Kadib marki aad dirto diidmada waxaad sugaysaa uun sida ay uga soo jawaabaan shirkadu. Hadii aysan shirkadu kuusoo dirsan shuruudo kale wax kale uma baahnid in aad sameyso.
Hadii shirkadu dhahaan in aad ogolaatay bandhigi
Hadii ay shirkado dhahaan in aad ogolaatay bandhigi ama in aad wax ka dalbatay waa in ay shirkado cadayn kartaa. Waxaad shirkada weydiisan kartaa in ay ku tusaan cadayn ah in aad shirkada la gashay heshiis.
Shirkada maku soo wacday?
Iibinta telefoonada shuruud ahaan wuxuu sharcigu u baahanyahay in ay shirkadu kaa hayso adiga ogolaansho qoraal ah si heshiisku u noqdo mid ansax ah. Waxay ku xirantahay hadii ay shirkadu kusoo wacday ama hadii ay shirkadu kugu dhiiri galisay in aad soo wacdo. Hadii aanad u ogolaanin qoraal ahaan heshiiska ma ahan mid ansax ah, wax waajib ahna kuguma lahan shirkada in aad dhiibto. Lakiin hadii aad adiga marka hore wacato shirkad si aad ugu iibsato alaabo majiraan wax shuruud qoraal ah.
Sidee tahay ogolaansho qoraal?
Qoraal ansax ah wuxuu u ekaan karaa siyaabo kala duwan. Waxaad tusaala ahaan:
In aad saxiixdo warqad laguugu soo diray guriga
Ogolaansho elektaronig ah sida email ama sms
Ogolaansho aad ku ogolaato bank-ID
Ogolaanshaha waa in ay dhacdaa wada hadal kadib, si aad u hesho waqti aad uga fekerto wixi laguu soo bandhigay. Ma wanaagsana hadii shirkadu kugu dhiiri galiso inaad ogolaato bandhiga inta lawada hadlayo.
Diid hadaadan qoraal ahaan ansixinin
Hadii shairkado kaa rabto in aad bixiso adigoo qoraal ahaan ansixinin bandhigi, waad iska diidi kartaa adigoo tilmaamaya in ay san jirin wax heshiis ah.
Hadii aad hesho alaabo aanad dalbanin
Hadiiba aysan jirin wax heshiis ah oo idiin dhexeeya adiga iyo shirkada waajib kuguma ahan in aad u celiso alaabihi ay kuusoo dirtay shirkada. Hadii ay rabto shirkada in aad alaabta usoo celiso ama aanad rabin alaabtaa in ay kuusii yaalaan waad ka codsan kartaa shirkada in ay bixiyaan qarashka ku baxaaya alaabta markaad u direysid iyaga.
Hadii aad hesho qaansheegad badan, xasuusino ama sheegashada aruurita deynta
In kastoo aad diiday qaansheegadka waxaa dhici karta in shirkadu ku adkeysato codsigeeda oo ay kuusoo dirto qaansheegado, xasuusino ama ay kuusoo dirto shirkada sheegashada aruurita deymaha.
Hadii aad hesho qaansheegado cusub
Hadii aad hesho qaansheegado waxyaabo kale ka hadlaayo oo aanan ahayn kuwi aad hore u diiday, waxaad mar kale u baahan tahay in aad la xiriirto shirkadi qoraal ahaan si aad isaga diido.
Hadii aad hesho xasuusino ah qaansheegado aad hore isaga diiday
Hadii aad hesho xasuusin ah qaansheegad aad hore isaga diiday uma baahnid in aad diidid xasuusinta. Maadaama aad qaansheegadki gore diiday oo aad hore ugu faahfaahisay in aad bixindoonin.
Hadii aad hesho sheegashada uruurita deynta
Xaalada qaarkood waxay shirkadoho u jeestaan shirkada uruurita deymaha si ay uga caawiyaan in lacagahoodi loosoo uruuriyo. Marki aad hesho sheegashada uruurita deynta ma ahan micnaheedo in aad bixiso ama aad bixin doonto lacagtaa. Waad iska diidi kartaa sheegashada uruurinta deynta sidii aad isaga diiday qaansheegashadi hore. Laakiin waxaad u baahantahay in aad ka diido shirkada uruurinta deynta maadaama ay iyago kuusoo direen sheegashada. Waa muhiim in aad u sheegtaa sababaha aad u diiday shuruudaha. Ka feker in aad mar walba ay diidmadaado ahaato qoraal, tusaale ahaan email.
Hadii ay shirkado u jeesato xaga hayadda qasab ku uruurinta deymaha
Marmar waxay ay shirkado u jeesataa xaga hayadda qasab ku uruurita deymaha si ay uga hesho caawiyaan uruurinta lacagaha ka maqan. Waxaa la dhihi karaa in ay codsadaan wax la dhaho amar lacag bixineed. Laakiin weli waxaad heysataa fursad aad ku diido hadii ay shuruuduhu qaldanyihiin.
Hadii ay shirkado u jeesato hayadda qasab ku uruurinta deymaha waxaa xagooda kaaga imaanaaya warqad. Warqadaa waxaa ku yaala wixi aad sameyn lahayd hadii aadan ku raacsaneyn shuruudaha meesha ku qoran iyo dhirirka waqtiga aad ka jawaabi kartid.
Hadii aad waqtiga jawaabta laguu qabtay hadaa laxiriirto hayadda qasab ku uruurita deymaha in uu codsigooda oo qaldanyahay uma baahnind in aad bixiso. Hadii aanad waxba sameynin waxaa la dhihi karaa hadii aadan wax bixin ama aadan ogeysiinin in ay wax qaldan yihiin waxay hayadda qasab ku uruurinta deymaha kaa gaareysaa goaan. Macnaheedo waxa uu yahay in ay hayadda qasab ku uruurinta deymaha goaan kaa gaareyso in aad bixiso wixi shirkadu kugu sheegatay. Markaasna waxaad heleysaa lacag dhaleeceyn taas oo macnaheedo yahay in shirkada ka warbixinta amaahda ay ku dhaleeceyneyso inaadan bixin deynti waqtigeedi.
Hadii aad diidido shuruuda hayadda qasab ku uruurinta deymaha waxey shirkado u baahantahay in ay u jeesato maxkamad si goaan looga gaaro hadii ay xaq u leeyihiin lagactooda ama aysan u la heyn.
Hadii aad adiga iyo shirkada heshiin weysaan
Hadii aad u baahantahay talo waxaad la xiriiri kartaa macaamiisha Hallå. Waxaa nahay kuwa u adeega warbixin qaran oo ku siin kara warbixino ku saabsan xuquuqdaada iyo wax yaabo kale oo aad hore ugu sii socon karto. Waxaa bixinaa talooyin madax banana sidaa darted ma qiimeyn karno kiiskaaga shaqsiyeed, maca xalin karno khilaaf kaaga mana kuula xiriiri karno shirkad.
Warbixinada lagala xiriiri karo macaamiisha Hallå
Hadii adiga iyo shirkadu heshiin weysaan waxaa badanaa ku dacweyn kartaa Gudiga cabashada guud oo loo soo gaabiyo (ARN) si khilaaf kaaga loo tijaabiyo. Gudiga cabashada guud (ARN) ma tijaabinato khilaafka hadii arintu ay u gudubto hayadda qasab ku uruurinta deymaha ama maxkamad.
Wax badan ka akhriso sida loogu gudbiyo ashtakeyn ARN:Ss boga internetka